Tigrai Online, April 21, 2018
Prime Minister of Ethiopia Dr. Abiy Ahmed continues his tour of Ethiopia encounters the fake question of identity in Gonder
Prime Minister Abiy Ahmed tour of Amhara follows similar visits to the Ethiopian regional states of Somali, Oromia, and Tigrai. In Somali, Oromia, and Tigrai states he was welcomed warmly and with great enthusiasm. All the people of Ethiopia are hopeful and waiting this young leader to invigorate the EPRDF as a party and Ethiopia as a country.
So far, we think the new Prime Minister of Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed has brought a positive energy to Ethiopia. From his speeches in Addis Ababa, Somali, Oromia, Tigraia and Amhara, what is your reaction to Dr. Abiy so far?
Prime Minister of Ethiopia Dr. Abiy Ahmed continues his tour of Ethiopia this time it was Amhara regional state